» किरण र अस्मिताको गीत ट्रेण्डिङमा
किरण र अस्मिताको गीत ट्रेण्डिङमा
१३ श्रावण २०७७, मंगलवार १६:५२
मकवानपुर, १३ साउन । नेपाल आईडलबाट सर्वाधिक चर्चामा आएका प्रतियोगी तथा गायक किरण भुजेल र गायिका अस्मिता अधिकारीको ‘आँखामा बसाउ मलाई’ बोलको गीत सार्वजनिक भएसँगै भाईरल भएको छ । यो गीतको म्यूजिक भिडियो अहिले ट्रेण्डिङमा पनि परेको छ । यो गीतलाई दर्शक श्रोताले मन पराएर लाईक, कमेन्ट र शेयर पनि गरिरहेका छन् । गीत टिकटक जस्ता एपहरुमा भाईरल भएको छ । द डिभाईन म्युजिकको अफिसियल युट्युब च्यानलबाट सार्वजनिक भएको गीतलाई यो सामग्री तयार पार्दाको समयमा २ लाख ८४ हजारभन्दा बढी पटक हेरिएको छ । गीतमा १५ हजार लाईक र ७ सयभन्दा बढी कमेन्टहरु गरिएका छन् । ४८ नम्बर ट्रेण्डिङमा परेको यो गीत ४६, ४२, ४१, ४० हुँदै यो सामग्री तयार पार्दाको समयमा ३७ औँ नम्बर टे«ण्डिङमा रहेको छ । गीत लगातार टे«ेण्डिङको शिरतिर दौडिरहेको छ ।
यसैबिच गीत भाईरल भएपछि किरणले सामाजिक सञ्जालमा लाईभ आएर सबै दर्शक श्रोतालाई धन्यवाद दिएका छन् । गीत ४८ नम्बरमा ट्रेण्डिङमा हुँदा उनले यो लाईभ भिडियो शेयर गरेका थिए । उनले लाईभमा आएर गीतका बारेमा श्रोतालाई थाहा नभएका केही कुराहरु पनि खोलेका छन् । उनले लाईभमा के भनेका छन् ? हेरौँ यो भिडियो रिपोर्ट–
सुमधुर आवाजसँगै अभिनय कलामा पनि दख्खल राख्ने यी दुई गायक गायिकाले गीतको म्युजिक भिडियोमा रोमान्टिक अभिनय गरेका छन् । जीवनसाथीबिचको रोमान्टिक भावना समेटिएको गीतको शब्द चर्चित संगीतकार अर्जुन पोखरेलले लेखेका हुन् । गीतलाई पोखरेलले नै संगीत र एरेञ्ज गरेका हुन् । गीतको म्युजिक भिडियोलाई उत्सव दाहालले छायाँकन गरेका उछन् । विधान कार्कीको निर्देशनमा तयार भएको म्युजिक भिडियोलाई विकास दाहालले सम्पादन गरेका छन् । हेरौँ गीतको भिडियो–
आदरणीय दर्शकविन्द, तपाईलाई किरण र अस्मिताको गीत कस्तो लाग्यो ? कृपया भिडियो हेरेर कमेन्ट गर्नुहोस् । यस्तै भिडियोहरुका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राईब गर्नुहोस् ।